Arrintii keentay inay Itoobiya taageerto Xasan Sheekh oo soo shaac baxday iyo sir ay laheyd Masar oo fakatay! - Caasimada Online
Home Warar Arrintii keentay inay Itoobiya taageerto Xasan Sheekh oo soo shaac baxday iyo...
Arrintii keentay inay Itoobiya taageerto Xasan Sheekh oo soo shaac baxday iyo sir ay laheyd Masar oo fakatay!
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxay dowladda Itoobiya ka dhawaajiyey inay taageersan tahay madaxweynihii waqtigiisu dhamaaday Xasan Shiikh Maxamuud iyadoo dadaal badan ku bixisay sidii uu mar kale dib ugu soo laaban lahaa xilka madaxweynimo ee Soomaaliya.
Haddaba xog ay heshay Caasimadda Online ayaa muujineyso sababtii ka dambeysay inay itoobiya si kal iyo laab ah u taageeraan Xasan Shiikh Maxamuud oo xiriir fiican la lahaa Itoobiya.
Wixii markaas ka dambeeyey waxaa xumaaday xiriirka dowladaha Masar iyo Itoobiya sidoo kalana waxaa Xasan Shikh Maxamuud ka aamin baxday dowladda Masar, taas badalkeeda wuxuu kalsooni buuxda ka helay Hailemariam Desalegn